Abuur burushkaaga Photoshop oo ku diyaari maktabadaada | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Burush
Burushku wuxuu matalayaa sawir qaadayaasha mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah waxqabadka shaqadaada sawirka leh qalabka Photoshop. Waana inta badan, waxay leeyihiin dhibaatooyin waxayna la yimaadaan waqti lumis markii ay isku dayayeen inay u helaan burushka saxda ah ee shaqada ay doonayaan inay qabtaan.
Nasiib wanaagse, adiga laftaadu waad awoodaa samee burushyadaada Hadana sifiican, waxaad kagaheli kartaa maktabadaada markaad ubaahantahay. Marka maqaalkan, waanu kuu sheegi doonaa sida loo abuuro burushkaaga Photoshop iyo sida loo dalbado.
1 Abuur burush kuu gaar ah oo ku diyaarso maktabaddaada
2 Sida loo abuuro burush Photoshop
3 Ikhtiyaarrada wax looga beddelayo xulashooyinka burushka ee Photoshop
3.1 Kala firidhsan
3.2 Ikhtiyaarka qurxinta
3.3 Ikhtiyaar buraash laba jeer
3.4 Ikhtiyaar midab firfircoon
3.5 Xulashada wareejinta
4 Fursadaha kale ee lagu abuurayo burushyada Photoshop
5 Sida loo abuuro maktabad burush adiga kuu gaar ah
Abuur burush kuu gaar ah oo ku diyaarso maktabaddaada
Si aad ugu shaqeyso qaab abaabulan, waxaa lagu talinayaa marka hore ka saar dhammaan burushkaas aanad adeegsan, mar hadaad shaqooyinkaaga qabato waxaad ogaan doontaa kuwa kugu habboon ama aan laga takhalusi karin.
Sida loo abuuro burush Photoshop
Xusuusnow waad awoodaa abuur burush cusub sidoo kale waxaad wax ka bedeli kartaa kuwa aad horey u haysatay.
Ka bilaabanaya shiraac maran oo lagu sawiray burushyada aad heli karto, calaamado ku samee sidaad u jeceshahay oo ah cirro iyo madowMarka aad diyaar garowdo, isticmaal qalabka xulashada si aad calaamadda u qaadatid iyo u badbaadi sidii buraash cusub, xulo xulashada 'Edit', qeex qiimaha burushka oo sii wad magacaaga aqoonsi dambe, riix OK oo waxaad u abuuri doontaa buraash aasaasi ah Photoshop.
Hadda waa la sharaxi doonaa sida burushka loo siiyo astaamo kale oo muhiim ah Si loo helo muuqaal iyo saameyn gaar ah, tan waxaa lagu dhammaystiray xulashooyinka caarada burushka.
Si taas loo sameeyo, waa inaad xulo burushka horay loo abuuray oo tag xulashooyinka burushka, adigoo gujinaya "Daaqadda-Burushka".
Ikhtiyaarrada wax looga beddelayo xulashooyinka burushka ee Photoshop
Xulashada isbedbeddelka leh ee qaabka
Tani waxay u oggolaaneysaa in la sameeyo wax ka beddelka qaabka iyo cabirka burushka, sidoo kale miisaanka iyo xagalka xarriiqdiisa iyo wareegga caaradda tan.
Iyada oo loo marayo buraashka ayaa awood u leh inuu ka tago noocyada kala firidhsan ama urursan Marka loo eego dhadhanka farshaxanka, waxaad dooran kartaa inaad kiciso labada faasas ee calaamadaha isu dhigma.
Abuur buraashkaaga Photoshop leh qaabab gaar ah, waad ku dari kartaa saamaynta dhalaalka, cabirka, qoto dheer, iwm u yeelashada
Ikhtiyaar buraash laba jeer
Iyada oo aad ku biiri karto burush aad horey ugu keydisay mid kale oo aad sidoo kale wax ka bedel ku sameyn karto, waxaa lagugula talinayaa inaadan buunbuunin abuurka labadan burush labba tan iyo hoos u dhig aaladda Photoshop.
Ikhtiyaar midab firfircoon
Burushkan waxay badalaan midabka ilaa inta jidku socdo, waa haddii la adeegsado "ku adeegso caarada" xulashada.
Iyada oo tan loo marayo, waa suurtagal in lagu garaaco burushkayaga sida mugdi ah sida aan dooneyno oo aan u helno hoos u dhac quruxsan oo qarsoon. Fursadaha kale ee la heli karo ayaa lagu marin karaa burushka qasmada, laakiin waxay u baahan yihiin xusuus badan oo RAM ah, haddii aan la helin waxaa lagu talinayaa in laga fogaado in la dhaqaajiyo.
Waa suurtagal in la beddelo rabitaanka caarada buraashka.
Fursadaha kale ee lagu abuurayo burushyada Photoshop
Sawaxanka, wuxuu iftiiminayaa geesaha dariiqa
Geesaha qoyan, ku daydaan saamaynta biyo-biyoodka
Isku dheelitirnaanta, waxay u shaqeysaa inay ku siiso waxtarka rinjiga rinjiga (buraashka hawada)
Wareegyo siman oo jilicsan
Marka burushkaaga Photoshop la badbaadiyo, waxaad samayn kartaa xulasho kuwa aad isticmaali doontid kuwa ugu badan, kuwa aad ugu jeceshahay ama waxkastoo dhiirigaliya inaad kooxeysato.
Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in qof kasta oo Photoshop u adeegsada qalabkiisa shaqo, ay aad u faa'iido badan tahay in la ogaado tilmaamahan, laakiin sidoo kale iyo ka dib marka dhibaato la abuuro burush kasta oo ay jecel yihiin, awood u yeelan karaan inay abaabulaan, waxay faa'iido u yeelan doontaa isticmaalka dambe; Waad u abuuri kartaa maktabad kuu gaar ah tan.
Sida loo abuuro maktabad burush adiga kuu gaar ah
Waa inaad gujisaa Tafatirka, maareeyaha goobaha iyo maareeyaha goobaha la aasaasay. Ku soco xulo dhammaan burushyada aad rabto inaad kooxaysid oo guji "badbaadi set". Ka hel qayb ka mid ah kombuyutarkaaga, u qaado galka "burushyada”, Kaas oo ku dhex yaal Photoshop oo laga helay faylasha barnaamijka, Adobe Photoshop, presets, burush.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Burush » Abuur burushkaaga Photoshop oo ku diyaari maktabadaada
Tallaabooyinka lagu abuurayo astaan ​​wanaagsan oo loogu talagalay nooc ama shey